Rooble oo la kulmaya Madaxweynayaasha Puntland & Jubbaland - Awdinle Online
Rooble oo la kulmaya Madaxweynayaasha Puntland & Jubbaland
Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa la filayaa in todobaadkan oo kulan la qaato Madaxweynayaasha Puntland & Jubbaland oo ku sugan Magalada Muqdisho.
Kulanka oo qabsoomaya Maalinta Berito oo kahmiis ah ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii Wakiilada Beesha Caalamka gaar ahaan Mareykanka, QM iyo UK ay ku cadaadiyeen Madaxda Jubbaland & Puntland inay la kulmaan Ra’iisul Wasaaraha.
Kulanka ayaa waxaa uu qeyb ka yahay kulan doceedyada kahor shirka guud, kuna adkeysteen Beesha 6aad in aan cidna baxeynin Magaalada Muqdisho Ilaa heshiis doorasho la galo.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa shalay waxaa ay la kulmeen Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, iyaga oo ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashooyinka.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa Magaalada Muqdisho ka socday kulamo gaar gar ah oo ay lahaayeen Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Xubnaha Midowga Musharixiinta si loo qabto doorasho loo dhan yahay.
Previous articleGolaha Shacabka oo kulan walaac laga muujiyay maanta yeelanaya
Next articleCiidamo xoogan oo la dhigay wadooyinka gala Madaxtooyada